डोनाल्ड ट्रम्पले जिते के हुन्छ? – Hotpati Media
आज: | Mon, 25, Jan, 2021
होमपेज / अन्तर्वार्ता
डोनाल्ड ट्रम्पले जिते के हुन्छ?
१२ पुष २०७३, मंगलवार ०५:३१ मा प्रकाशित (4 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं -विश्वको सबैभन्दा ठुलो, गरिमामय र शक्तिशाली जागिरको लागि आउदो नोभेम्बर आठमा एउटा महासङ्ग्राम हुँदै छ। त्यो जागिर हो – अमेरिकाको राष्ट्रपती पद, त्यो महासग्राम हो– राष्ट्रपतिय निर्वाचन। यो निर्वाचन विश्व भु–राजिनितीलाई सजिलै हल्लाउन सक्ने पदका लागि भएकाले विश्वमै यसलाइ महत्वका साथ हेरिएको छ।
यो पदका लागि ग्यारी जन्सन तथा जिल स्टेनको पनि उम्मेदवारी छ र पनि यसका प्रत्याशी भने हिलारी क्लिन्टन र डोनल्ड ट्रम्प मध्येका एक हुनेछन्। यदी हिलारी यस निर्वाचनमा बिजयी भइन् भने उनी अमेरिका कै पहिलो महिला राष्ट्रपती र क्लिन्टन जोडी पहिलो दम्पती हुने छन् जो दुबै ब्यक्तीको नाम राष्ट्रपतीमा दर्ज हुने छ। हिलारी क्लिन्टनले सन २००८ मा पनि डेमोक्र्या्टिक पार्टीबाट नोमिनसन दिएकी हुन् तर बाराक ओबामाले उनलाई उछिनेका थिए, जसरी उनले यसपाली साल बर्नी स्यान्डर्सलाई उछिनिन्।
अमेरिकि राष्ट्रपतिय निर्वाचनको ईतिहासमा पहिलो महिला उम्मेदवारी १८७२ मा भिक्टोरिया उडहलको थियो। तर, कुनै मुख्य पाटीको तर्फबाट भएको महिला उम्मेदवारी भने यो पहिलो हो।
आधा आकाशको सम्बेदना बटुलेकी हिलारी महिला मुखी आवाज, नारी सशक्तिकरण तथा बालबच्चाको हक अधिकारका लागि बोल्ने उम्मेदवारका रुपमा परिचित छिन्। ट्रम्प अमेरिकि देश भक्तीका भावलाइ अभिब्यक्त गरेका छन्। मुख्य नितिहरुमा धेरै बिमती नभएपनि ट्रम्पले देश भित्र रहेका ब्यवसायहरु चर्को करका कारण देश छोडेर बाहिर गएको र त्यसले राजस्व तथा रोजगारीमा प्रभाव परेको दावी गरेका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पुनः देश भित्र्याउनु उनको मुख्य उदेश्य रहेको बताएका छन्। उनि कर घटाउने योजनामा छन भने हिलारी कर बढाउने योजनामा छिन।
राजनीतिमा ब्यक्तिगत कुराहरु उछाल्नु भन्दा नितिगत कुरामा जोड दिनु राम्रो हो। नितिगत बिमती हुँदाहुँदै पनि अमेरिकि राष्ट्रपतीको मुख्य उत्तरदायित्व चाहे जुन पाटिको आए पनि एकै किसिमको हुन्छ –विश्वको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु। अहिले जलबायु परिवर्तन, आणविक हतियर ब्यबस्थापना, ईस्लामिक स्टेट, लैङ्गिक वा जातिय बिभेद, विश्वमा बड्दै गैरहेको शरणार्थि समस्या आदिमा मुद्दा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गएका तिनै वटा बहस मुलतः ब्यक्तिगत आक्षेप र कटाक्ष मै केन्द्रित रहयो।
धेरै बिश्लेषकहरुले ‘लज्जाजनक बहष’ भने। हिलारीका पति बिलको स्त्रिलम्पटता र ब्याभिचारसँग पटक पटक जोडेर हेरियो भने उनी व्हाइट हाउसमै सेक्रेटरी भएर काम गर्दा लिक भएका सम्बेदनशिल पच्चिस हजार ईमेलहरु डिलिट गरेको भनेर चर्कै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। त्यस्तै ट्रम्प पनि महिला बिरुद्द गरेका आपत्तिजनक ‘लकर रुम’कुराकानी र भिडियो तथा दश जना महिलाले एक पछी अर्को उनले गरेका दुब्र्यबहारका साक्षी भन्दै मिडियामा छाएपछी निन्दित भए।
ट्रम्पको चुनावी अभियानको नारा ‘अमेरिकालाई पुन महान बनाउ’ हो। अमेरिकालाई राम्रो देख्न चाहनेले डोनाल्ड ट्रम्पलाई भोट् हाल्दा हुन्छ। तर, मोफसलका मुलुकहरु अमेरिका मात्र हाइन पुरै विश्वमा शान्ती र सबृद्दी फैलिएको देख्न चाहन्छौ। यसका लागि राष्ट्रपति ट्रम्प होइन हिलारी आवश्यक छ।
ट्रम्प राष्ट्रपती भए भने एसियामा के प्रभाव पर्ला?
यसको जवाफ प्रियकर छैन।
हिलारीले जितिन भने ओबामा प्रशासनको निरन्तरताको अर्काे रुपमात्र हुने छ। किनकी हिलारी डेमोक्र्याटिक पार्टीको उत्तराधिकारी भएर उनी आउँदैछिन्। नितिगत सवालमा थोरै फेरबदल भएपनि विश्वका अन्यमुलुकहरुप्रति अमेरिकाले देखाउने उदारतामा खासै बदलाव् आउने छैन।
ट्रम्पले जिते के हुन्छ? यसको जवाफ भने तेस्रो मुलुकहरुकालागी प्रियकर छैन। डोनाल्ड राष्ट्रपती भएको खण्डमा निति तथा स्थिति बद्लिने छन्। चिनले अमेरिकाको आर्थिक र राजनैतिक दबदबा एसियामा कमजोर भएको हेर्न चाहन्छ। डोनाल्डले जितेको खण्डमा चिनको यो चाहना चाहना पुराहुने सम्भावनाका ढोकाहरुले खुल्नेछन्।
ट्रम्पले ‘अब बारम्बार चिनबाट आफुलाई बलात्कृत हुन दिइरहन सक्दैनौ’ भनेको अभिब्यक्तिले पनि चिनलाई टाउको दुखेकै हुनुपर्छ। डोनाल्डको चिनप्रतिको बैदेशिक ब्यापार नितीसँगको असन्तुष्टी यो पहिलो होइन।
दक्षिण चिन सागरलाई लिएर फिलिपिन्स र चिनसँग अमेरिकाको बिबाद, ताईवानलाई चिनले अतिक्रमण गर्न खोज्दा अमेरिकाले गर्न खोजेको प्रत्यक्ष बिरोध, दक्षिण अमेरिकि मुलुकहरुमा जलबिद्युतमा चिनले गरेको लगानी आदि इत्यादी कारणले अमेरिका चिन प्रति संदिग्ध रहदै आएको छ। डोनल्ड ट्रम्पको आगमनले यो संदिग्धतालाई शितयुद्दमा नपुर्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन। पुरै एसियासँग ट्रम्प अलिक बढी ‘अलुफ’ छन्।
केही समय अघि डिप्लोम्याट पत्रिकाले ट्रम्पको एसिया सँगको सम्बन्धको बारेमा उजगार गर्न खोजेको थियो। ट्रम्पले जितेभने एसियासँगको अमेरिकाको सम्वन्ध ‘सङ्कटमा पर्ने’ पत्रिकाले दावी गरेको थियो।
दक्षिण कोरिया तथा जापानसँगको लामो सम्बन्धलाई बिर्सदै डोनोल्डले बताएका थिए ‘सहयोग दोहोरो हुन्छ, उनिहरुले हामीलाई पैसा दिदैनन् भने अहोरात्र सैन्य तैनाथको ठेक्का पनि हामी लिइरहन सक्दैनौ।’ दक्षिण कोरियामा रहेका अमेरिकी सेनाहरुलाई फिर्ता बोलाउने सन्देश थियो उनको यो भनाइमा।
अन्य मुलुकहरुमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरुलाई फिर्ता बोलाएर बोर्डर सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने ट्रम्पको इच्छा बुझिन्छ। जापानबाट अमेरिकी सैनिक झिकाउने हो भने चिनले जापानसँगको बिबादित टापुहरुमा शिघ्र अधिपत्य जमाउन कदम चाल्ने छ। त्यस्तै गरी दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनासाथ उत्तर कोरियाले दक्षिणलाई धावा बोल्ने छ।
ट्रम्पको बिजय भएमा यसरी एसिया असन्तुलीत हुने छ।
ट्रम्पले मुस्लिम समुदाय बिरुद्द गर्दै आएका टिप्पणीहरुले एसियाका मुस्लिम मुलुकहरु रुष्टछन। उनको कार्यकालमा यी देशहरु सँगको सम्बन्ध अमिलै रहने छ। साथै ट्रम्पले बिना कागजात बसेका करिब एक करोड दसलाख मानिसलाई आफ्नै देश पठाउने घोषणा जो गरेका छन् यसले एसियाली जनतालाई बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ किन भने अनुपातको हिसाबले त्यसरी बस्नेमा उनिछन्। यसले पनि एसियाली मुलुकहरुलाई प्रभाव पार्ने छ।
अन्तर्वार्ता सम्बन्धि थप
‘प्रस्ताव फिर्ता लिऊँ अनि बैठक बसौँ भन्न मिल्छ ?’ नारायणकाजी श्रेष्ठ
‘नेपालको अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ’ -अर्थमन्त्री पौडेल
‘नियमित रेल सञ्चालन छिट्टै हुनेछ’ -भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ
नेपाली कलालाई सरकारले नै नजर अन्दाज गरेको छ
अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ ः गृहमन्त्री थापा
अस्ट्रेलियाले फाइजरको भ्याक्सिनलाई दियो अनुमति
कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिने
प्रधानमन्त्रीद्वारा राप्ती नदीमा पुल उद्घाटन
टिपरले ठक्कर दिँदा दुईको मृत्यु
‘संसद विघटनको विरोध गर्ने लोकतन्त्रविरोधी हुन्’ -प्रधानमन्त्री ओली
निर्वाचन आयोगले दिएन नेकपा विभाजनलाई मान्यता, पहिलेकै पार्टी यथावत रहने निर्णय
झोलुङ्गे पुललाई विश्व रेकर्ड राख्ने प्रक्रिया शुरु
बिव्लव बन्द प्रभाव: मा प्रेसर कुकर बम फेला
खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै
सिड्नी – अस्ट्रेलियाली औषधि नियामक निकायले फाइजरले विकास गरेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपलाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्कट... विस्तृतमा
मेक्सिको–अमेरिकी सीमा नजिक १९ व्यक्ति मृत भेटिए
खानीभित्र फसेका ११ जनाको सकुशल उद्धार
भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणमुक्त हुनेको दर ९६.८२ प्रतिशत
कोरोना खोपको अभावपछि यूरोपका कतिपय स्थानमा खोप अभियान नै स्थगित
रेलमार्गमा टिकटक बनाउँदा एक पाकिस्तानी युवाको मृत्यु
श्रीलङ्काले युद्धकालीन अपराध आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने